O Guia Do Semalt: Criando O Conteodo Que É Viral
Ukuthengiswa kwe-intanethi kukwabelana ngokutya idatha. Ngenxa yoko, abantu baqhubeka bexubana kunye nokwabelana ngolwazi, ngoko iimpembelelo zemoya zichaphazela abantu. Abantu babandakanyeka ngentshiseko ngezinto ezithandekayo okanye zithintela iimvakalelo zabo ngendlela eyahlukileyo - cheap vps service. Olu lwalamano luyisiphumo esinokusetyenziswa ngabathengisi ukwenza abantu baqonde into ethile ngendlela ethile.
Kwiwebhusayithi okanye kumabonakude ezentlalo, umntu unokufumana umxholo wakho ufanele ukwabelana. Ukusuka kule ngquzulwano, ulwazi luyakwazi ukusasazeka nokunye ukufikelela kwizigidi zabantu apho. Impembelelo izuza njengoko ikhula ngokwayo, imeko eyaziwa ngokuba yi-viral loop. Iingcambu zentsholongwane zibalulekile kuzo zonke iikhankaso zokuthengisa. Basinceda siqonde iindlela ezahlukeneyo zokuqalisa le nto kwaye siphumelele kwimiphumo yaso.
Izindlela ezimbalwa ongayenza ngayo le ngqungquthela yentsholongwane enikezelwa yinkcenkceshela ye Semalt Iinkonzo zeDivital, u-Andrew Dyhan.
1. Qulunqa umxholo onokwenene
Isiqulatho sakho sifanele sibe neendawo ezahlukeneyo zokunxibelelana kwezentlalo. Nangona ulungele ukwenza ukuba umxholo ubonakale ngokwenene kumanethiwekhi asekuhlaleni, kufuneka ukhangele ngokumangalisayo kwiiplatifti ezininzi. Ukuhlukahluka kwenzeka ngenxa yokuba iinkqubo ezahlukeneyo zeekhompyutha kunye neenkqubo zokusebenza zineempendulo ezahlukeneyo kunye nobubukeli. Ngenxa yoko, unokusebenzisa ezinye iiplatifti eziqhelekileyo ezifana nePinterest kunye ne-Twitter..Kwi-Twitter, kukho inani elininzi labalinganiswa be-160.
2. Yenza abameli bakho
Sebenzisa abameli ukuba benze umxholo uhambe nge-viral ngokusebenzisa i-ambassadors. Ukufumana umbukeli wesikhathi esidala ukubona umxholo wakho kulula kakhulu kunokufumana umntu omtsha ukubona into efanayo. Ngenxa yoko, le nkqubo inokufumana abantu abatsha ukubona umxholo wakho kunye nababukeli bakudala. Enye yeendlela eziphambili zokuphumeza oku kukuthengisa nge-imeyile. Abantu kwiintlobo zakho zee-imeyili babekhe babe ngabaxhasi bakho. Olu lwalamano lithetha ukuba ukufikelela kubo kulula kakhulu kunokudala abaphulaphuli abatsha. Ukusuka kula bantu unokubangela ukuhamba nge-virtual loop ngeendlela ze-SEO kunye neNtengiso yezoLuntu. Ngokuqhelekileyo, abantu banomncintiswano wokubonelela ngokukhululeka.
3. Ukunciphisa iingxaki kunye nokusebenzisana
Njengoko uthabatha i-viral loop ngokukhawuleza, ukuwa kwezinto kunokulula. Iibhloko zeeblogi kufuneka zifune iindlela ezininzi zokugcina abaphulaphuli babo bazibandakanye. Ngale ndlela, banokuhlala besondelene nokubonelela ngolwazi olunenjongo kumnini. Ngokomzekelo, umthengisi wedijithali angafunda kwimibono abaphulaphuli badinga umzekeliso wevidiyo.
Ukudala i-viral loop yomxholo wakho kunokuba yikhefu ngokusebenzisa isicwangciso kwiphankaso yakho ye-SEO. Ngenxa yoko, abaninzi abantu bamise kwaye baxhamle umxholo we-intanethi ukwenza iinjongo zophando zikhangele ukuthembeka kwewebhusayithi yazo. Kwiimeko ezininzi, ezi ndawo ziphakamileyo, zandisa indawo abahlala kuzo kwi-SERPs. Le nqubo phakathi kwabanye ingenza umxholo wakho uhambe kwintsholongwane, isicwangciso esibalulekileyo sokuthengisa. Esi sikhokelo singenza iwebhusayithi yakho ithathe isithuthi kwiindawo ezininzi ezahlukahlukeneyo kwihlabathi. Ngenxa yoko, abasebenzisi banokufumana olu lwazi luncedo kwaye benza okulungileyo kuyo.